> Resource > Android > Recovery doonayay oo HTC: Ladnaansho tirtiray Photos & Videos ka doonayay oo HTC
Sidee inuu ka soo kabsado sawirada tirtiray ku doonayay oo HTC!
Hi jira, si qalad ah waan tirtiray oo dhan sawiro ku saabsan rabitaan HTC markii aan kor loo nadiifinta iyo ciidamada joojinta codsiyada. Ma jiraa qof ku caawin kartaa inuu ka soo kabsado ka photos waan ayaa laga badiyay? Mahad badan,
Oo hadlaya Guud, sawirka waxaa ku kaydsan kaarka SD gudaha rabitaan aad HTC. Waxaad iyaga si fudud u soo ceshano karaa a SD doonayay oo qalab soo kabashada card HTC . No photos arrinta, videos ama music, youc iyaga ka heli kartaa oo dhan dib u soo kabashada ah xaq u HTC rabaan.
Hel kabashada doonayay oo HTC koowaad: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Tani kabashada xogta la doonayay oo HTC (Windows ama Mac version) taageertaa dib u soo kabashada oo dhan telefoonada doonayay oo HTC, oo ay ku jiraan sawirrada, filimada iyo muusikada, iyadoo aan loo eegayn toogtay telefoonka ama laga soo wareejiyay meel kale. More, Waxaa soo kaban karto, kuwaas oo xogta laga telefoonada mobile kale, kamaradaha, kaamirada, iPod, iyo qalabka kale saari karo.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamadda sida ay raacaan si scan xogta aad lumay. Oo waxaad iyaga ku eegaan karo si loo hubiyo tayada ka hor inta aanad bixin, waayo, soo kabashada. Dooro version saxda ah waa socon for your computer.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ka heli xogta aad rabto in aad la soo kabashada sawirkan, fadlan badbaadin natiijada scan ka hor inta aanad version bixisay. Markaas oo keliya u baahan tahay inaad soo dhoofsadaan natiijada iyo dib u bilaabi inuu ka soo kabsado xogta, si looga hortago khasaaro xogta ka dib.
Kabashada doonayay oo HTC ka xaaladood ee soo socda:
Photo Recovery Tani waxay aad u saamaxaaya in ay soo kabsadaan xogta la doonayay oo HTC aad iyadoo aan loo eegayn waxaad iyaga laga badiyay ay sabab u tahay:
»Files dhaco tirtiray
»formatted aad Android
card »SD ee Android helay kharribeen ama geli
Halkan aynu qaadan version Windows ah in uu fuliyo kabashada doonayay oo HTC in faahfaahinta.
Step1. Connect oo waxay doonistaadu HTC in kombiyuutarka
Marka hore, xirmaan oo waxay doonistaadu HTC in kombiyuutarka la cable USB ah, iyo xaqiijiyo in la ogaado. Markaas aan bilowno barnaamij la doonayay oo HTC kabashada xogta, oo aad arki doonaa interface ah sida image hoose. Just ku dhufatey "Start" si ay u bilaabaan soo kabashada doonayay oo HTC ah.
Step2. Dooro doonayay oo HTC in iskaan
Haddii la doonayay oo la HTC si fiican u xiran computer ka, waxaa lagu soo bandhigi doonaa halkan la mid ah sida ay drives macquul ah kombiyuutarka. Waxaa Dooro iyo dhaqaaqo "Scan", si aad u ogaato dhammaan lumay photos, videos iyo music.
Step3. Xogta la doonayay oo Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh HTC iyo eegista soo
Scan ka dib, dhammaan xogta lumay waxaa laga heli doonaa oo si fiican loo kala saaraa. Waxaad dib u eegaan wax kartaa mid mid iyo hubi faylasha aad rabto in aad u qabtaan soo kabasho adigoo gujinaya batoonka "Ladnaansho".
Video tutorial soo kabashada doonayay oo HTC